हेर्नु’होस् नेपाली सेनाको यस्तो क’ठोर …. जुन भिडियो संसारभरी भाइरल (भिडियो हेर्नु’होस्) – Taja Khawar
हेर्नु’होस् नेपाली सेनाको यस्तो क’ठोर …. जुन भिडियो संसारभरी भाइरल (भिडियो हेर्नु’होस्)
प्रकाशित मिति: बुधबार, आषाढ ३०, २०७८ समय: ०:४९:३४
February 19, 2021 66132
संसारको लागी एक उदा’हरणीय बनेको नेपाली सेना लाई संसा’रकै बहादुरी सेनाको रुपमा चिनिन्छ । विशेषगरि गोर्खा सेनाको नामले संसारमाझ परिचित नेपाली सेना सँच्चिकै बाहादुरी छ्न । आफ्नो पुर्खा’को वीरतापुर्ण इति’हासलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढिरहेको गोर्खाली सेनाले भारत, बेलायत जस्ता देशह’रुमा पनि आफ्नो पक्कड उ’त्तिकै जमाइरहेको छ ।
यी दे’शहरुले हरेक वर्ष नेपालबाट हजारौं’को संख्या’मा सेनाको भर्ती गर्ने गरेको छ । आफ्नो निडर स्वभाव र क्षमतावान बुद्धि-विवेकले गर्दा संसारका दुश्”मनहरु नेपाली सेना’देखी थुरुरु काम्छ्न । त्यसोत हि’ट:लरले पनि भनेका थिए, म मेरो देशका सेनाहरु संसारका जुनसुकै सेनामा पनि लड्;न सक्छ्न, तर गोर्खालीको नाम सुन्नेबि’त्तिकै मेरो मुटु थर्कन्छ। ” यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि नेपाली सेना’को प्रभाव संसारमा कसरी परि’रहेको छ ।
यसरी नेपाली से’नालाई बलियो बनाउने सब’भन्दा ठुलो आधार हो, सैनिक तालिम । नेपाली सेनाले निकै नै शाहासिक तालिमहरु गर्दै आएका छ्न । त्यस्तै पछिल्लो समय एउटा भिडि’यो सामा’जिक संजाल, विशेषगरि युटुबमा भा”इरल नै भनेको छ । त्यो हो, नेपाली सेनाले तालिम गर्दै गरेको । आजभन्दा ११ महिना अगाडि युटु’बमा अप्लोड भएको यस भि’डियोले अहिले धेरै भ्युज कमा’इरहेको छ । उक्त भि’डियो हेर्न त’ल यहाँ क्लि’क गर्नुहोला ।
Last Updated on: July 14th, 2021 at 12:49 am